अवसरको सहि सदुपयोग गरौं–प्रल्हाद दाहाल – Ramro Sandesh अवसरको सहि सदुपयोग गरौं–प्रल्हाद दाहाल – Ramro Sandesh
अवसरको सहि सदुपयोग गरौं–प्रल्हाद दाहाल
Posted on January 13, 2020 /3महिना अगाडी / 446 Viewed
नेपाल बहु जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति भएको देश हो । यस्तो समाजलाई बहुलवाद समाज पनि भनिन्छ । विविधतामा एकता भएको यस्तो समाज विश्वको एक नमुना पनि हो हाम्रो देश नेपाल हो । तर आजभोलि आधुनिकताका नाममा यस्तो मिलेर बसेको समाजमा विभिन्न किसिमको विविधता आउन थालेको छ ।
हाम्रो देशमा को धनी ? को गरिब ? को कुन जात, धर्म, वर्ग छ भन्ने कुराको कुनै प्रवाह नगरी मिलेर बसेको हाम्रो समाजमा आजधोलि विभिन्न राजनितिक रंग अनि धनी गरीबको विभेदका कारण समाज देखावटीमा बढि जान थालेको छ । विगतमा पनि यो खाडल झन् बढि थियो तर एक आपसमा मेलमिलाप र आदर सम्मान थियो । समाजमा अहिलेको जस्तो देखावटी हुंदैनथ्यो । कसले कति कमायो ? के गर्यो ? भन्ने खालको केहि कसैलाई मतलब नै हुँदैनथ्यो तर आज जुन क्षेत्रमा लाग्ने मान्छे पनि पैसाकै लागि दौडिएको देखिन्छ । अझ सबैभन्दा धेरै त राजनितिमा पैसाको चलखेल बढि देखिन्छ । राजनितिमा स्थापित हुन पैसाको लगानी गर्नुपरे पछि जस्तो समाजसेवालाई कमाउने माध्यम बनाएपछि अरु पेसाको के काम होला ? अहिले समाजका जति पनि नव धनाढ्य छन् ती सबै राजनिति पृष्ठभुमि वा राजनितिक संरक्षणका व्यक्तिहरु ब्ढि छन् । आजभोलि राजनितिमा जसका प्रवेश भएको छ त्यो समाजसेवाभन्दा पनि कमाउनेै लागि भएको पाईन्छ ।
आजभोलि राजनिति गर्ने मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक भएको छ । पहिला पहिला समाजका अगुवा, लब्द प्रतिष्ठित भलाद्मीका रुपमा चिनिन्थ्यो भने अहिले भ्रष्ट्राचारी, गुण्डा, अन्त कतै नबिकेपछि राजनितिमा लागेका, नपढेका जस्ता भावनाले हेर्न थालिएको छ । यो भावनालाई जबसम्म चिर्न सकिंदैन तबसम्म अब आउने भावी सन्ततिले राजनितिलाई कहिल्यै राम्रो दृष्टिकोणले हेर्न सक्दैनन् । जबसम्म जनताले राजनितिलाई राम्रो रुपले हेर्दैनन् तबसम्म देश कहिल्यै बदलिन सक्दैन । देश बदलिन राजनिति बदलिनु पर्छ । जबसम्म जनताले राजनितिलाई स्वच्छ रुपमा पाउँदैनन् तबसम्म राजनितिमा जनताले विकल्प खोजिरहन्छन् । त्यसको मतलब देशमा कहिल्यै स्थायी सरकार रहँदैन भन्ने नै हो । फेरि नेपालमा के भयो भने एउटा राजनितिक दलले पालो पु¥याउने अनि अर्को फेरि आउने । त्यसले न जनताको हित छ न त नेताको नै हित छ । यसले दिर्घकालिन कसैको हित हुँदैन । त्यस कारण अब राजनिति गर्ने मान्छेले सोच्ने बेला आएको छ । यदि बेलैमा नसोच्ने हो भने जीवनमा कहिल्यै दोहो¥याएर पुनः त्यहि स्थान पाउन कठिन हुनेछ । अब सबैले राजनितिलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाऔं । राजनिति कै कारण हो देशको विकास हुने नहुने भन्ने कुरा । विश्वका जति पनि उदाहरण हेरौं ति सबै देशको उन्नती र दुरगति राजनिति कै कारण भएको देख्न सकिन्छ ।
सत्ता भनेको क्षणिक शक्ति हो । त्यसलाई सहि तरिकाले सबैको हित हुने तरिकाले प्रयोग गर्दा दिर्घकालसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भने आवेगमा जथाभावी प्रयोग गरियो भने क्षणिक हुन्छ । सत्तामा रहँदा व्यक्ति र नातागोता आफन्तको भन्दा पनि राष्ट्रको सम्वृद्धि र सुशासानमा पहलकदमी चाल्नु पर्दछ । त्यसमा सबैको हित हुन्छ । सत्ताको आडमा अराजक गतिविधि र नकारात्मक कुरालाई कहिल्यै साथ दिनु हुँदैन । आफ्नो अर्काको नभनी सबैको काम एकनासले गरिदिने र सबैको मन जित्न सक्नुपर्दछ । तब मात्र सदाका लागि त्यो पद प्राप्त हुन सक्छ । अन्यथा क्षणिक हुन्छ । जनतालाई भोट लिने बेलामात्र आफ्नो जस्तो सम्झने अरु बेला मतलब नगर्ने गर्नुहुन्न । नेता र कर्मचारीका लागि जनता नै अन्नदाता हुन् । उनीहरुले तिरेको करबाटै तलब भत्ता पाईन्छ । सबै जनतालाई सबल र सक्षम बनाउन सके मात्र देश सबल र सक्षम बन्न सक्छ । अन्यथा देश सधैं गरिब र समस्यामा नै रहिरहन्छ । तसर्थ देश विकासमा लागौं र आफू र जनताको हित सोचौं ।
आजभोलि हाम्रो देशमा अर्को पनि समस्या आउन थालेको छ । जुन नेता ठूलो पदमा छ त्यो नेताको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढि बजेट जाने, त्यहाँका जनतालाई अन्य कुराको सेवा सुविधा बढि पु¥याउने खालका गतिविधिले पनि देश विकासमा समस्या उत्पन्न भएका छन् । कुनै एउटा ठोस् ठाउँ र त्यहाँका जनताका कारणले मात्र त्यो ठाउँमा पुग्ने कारणले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ । अब देशको विशिष्ट पदमा पुग्नको लागि सबैको साथ सहयोग चाहिने खालको निति नियम बनाउनुप¥यो । देशका ठूला ठूलामा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुप¥यो ।
अनि मात्र सबैको बारेमा सोच्न थाल्छन् । होइन भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्दा देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न पाउने कारण पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । आजकाल हामीले हे¥यौं भने ठूला ठूला पदमा भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा भएका विकास र अन्य क्षेत्रमा हेर्न सक्छौं । बजेटको विनियोजन पनि त्यहि अनुसार भएको पाईन्छ । यसरी संविधानमा उल्लेखित समाजवाद कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? यसरी त झन पुजीवाद तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । जति गतिविधि भएका छन् ती गतिविधि हेर्दा देश समाजवादभन्दा पनि पुजीवाद उन्मुख भएको भान हुन्छ । अब यो अहिलेको अवसरलाई राम्रोसंग परिचालन गरि अगाडि नबढ्ने हो भने देश र जनता सबैले दुःख पाउने देखिन्छ । धेरै वर्ष पछि नेपालमा स्थायी ५ वर्षे सरकारले शासन गर्न पाएकाले यसलाई सहि तरिकाले उपभोग गरि देश र जनताको हितमा काम गरि जनताको मन जिति युगौं युगसम्म शासन आफ्नो हातमा लिन सक्ने अवसरलाई सदुपयोग गरी अगाडि बढ्न आज नेताहरुलाई यो ठूलो अवसर हो । त्यसैले सबै मिलि देश विकासका लागि पाएको अवसरको सहि सदुपयोग गरौं र सबैको हितमा लागौं ।–नव क्षितिज साप्ताहिकबाट
चौरी देउराली गाउँपालिका लाई लायन्स क्लव अफ काठमाडौँले गर्‍यो स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण